Hello Cats 1.5.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Hello Cats
Hello Cats ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကကြောင်အမိုးအကာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်နှင့်အခုအချိန်မှာကြောင်စုဆောင်းနှင့်ပေါင်းစည်းတဲ့ခရီးကိုစတင်ပါ! ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြောင်ချစ်သူများထံမှခွင့်ပြု, ဒါကြောင့်ဂရုတစိုက်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်တစ်ခမ်းနားနန်းတော်တည်ဆောက်ကျေးဇူးပြုပြီးလိမ့်မည်!
တခါတလေကြောင်ဒုက္ခဖြစ်စေပုန်းရှောင်ပါလိမ့်မယ်။ ယင်းဆိုးကြောင်ကိုဖမ်းရန်, ပဟေဠိအဆင့်အတွင်းမြေပြင်အနေအထားနှင့်အထူးအသားပေးတ္ထုကိုသုံးပါလိမ္မာပါးနပ်စွာထို့နောက်တစ်ဦးလုံလောက်သောပုံသဏ္ဍာန်ဆွဲပါ။ သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ devices တွေကိုရှာဖွေလည်းပဟေဠိအဆင့်ဆင့်၏တိုးတက်မှုအဖြစ်ကြီးမားသောဆုလာဘ်ဝင်ငွေလိမ့်မယ်။
2. နူးညံ့သိမ်မွေ့သောရူပဗေဒစနစ်နှင့်ပျော်စရာ devices များ။
3. ပွင့်လင်းစတိုင်ပဟေဠိ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလုပ်စမ်းပါ။
4. နောက်ထပ်ရယ်စရာအဆင့်ဆင့်နှင့်အနာဂတ် updates မှာအံ့သြဖွယ်ကြောင်။
Hello Cats အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Hello Cats အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Hello Cats အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Hello Cats အား အခ်က္ျပပါ
timed စတိုး010
Hello Cats ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Hello Cats အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Fastone Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.hellocatsplay.com/privacy.html
App Name: Hello Cats
Release date: 2019-06-23 02:24:16
လက်မှတ် SHA1: D4:89:9E:A2:1B:DB:BA:D2:60:03:66:3A:34:19:35:D6:BE:DD:B9:8C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): HelloCats
အဖွဲ့အစည်း (O): HelloCats
နယ်မြေ (L): HelloCats
နိုင်ငံ (C): HelloCats
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): HelloCats
Hello Cats APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ